Bogga ugu weyn Faallada Tophatter Daacad ah 2021: Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
Isha Sawirka: tophatter.com
In qofku noloshiisa ku mari karo khilaaf la’aan ama arrimaha soo kordhaa waa wax aan macquul ahayn. Tirada meheradaha ee maalin walba soo baxa, waa khalad haddii aadan weydiin su'aalaha qaarkood. Su'aalaha sida kuwa ka kooban dib -u -eegista Tophatter ee aad akhrinayso.
Tophatter oo ah madal wuxuu ku siinayaa fursad aad ku qabato waxyaabo aadan u malaynayn inaad samayn karto. Qaar baa laga yaabaa inay ku riyoodaan isku -dhac yar oo adduunka dhex mara oo ah safarka ugu habboon, laakiin iyada oo aan lahayn nooc dib -u -riixid ah, koritaanku suurtogal ma aha.
Dhab ahaan, sida qof doonaya inuu lacag sameeyo, mararka qaarkood albaabku mar walba ma furna. Waxa kale oo ay noqon kartaa mid gabow ah ama furaha oo dhulka yaal.
Sir Richard Branson ayaa leh “Fursadaha ganacsigu waa sida basaska, mar walba waxaa jira mid kale oo soo socda.” Marka, wax kasta oo ka soo baxa dib -u -eegista Tophatter, ha ahaato shirkad sharci ah ama khiyaano, hal shay waa hubaal - way fiicnayd inaad baadhay.
Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa Tophatter, waxa uu qabto, sida ay u shaqayso, iyo waxa aad ku samayn karto iyo app -ka Tophatter.
Dad badan oo saamayn leh ayay la kulmeen waxyaabo la mid ah. Iyaga waxay dareemeen wax fudud laakiin dhib badan oo adigana sidaas oo kale. Waxay ku wajahaysaa ikhtiyaar u dhexeeya inaad samayso waxaad u malaynayso inay sax tahay iyo xaqiiqooyinku waxay taageeraan waxa.
Qaybta ugu adag ayaa ah inaad ogaato inaad u dhaqmayso sidii qof ku qanacsan fikradahaaga ama haddii lagu khiyaaneeyo uun ego. Tani waxay ii keenaysaa sababta dib u eegistu muhiim u tahay. Dib -u -eegiddu waxay gacan ka geystaan ​​isu -dheellitirka miisaanka waxa noqon kara a jahwareerka bulshada, sida ay u badan tahay inay ka dhici doonto Tophatter, sida ugu dhakhsaha badan ayaad u ogaan doontaa.
Tusaale ahaan u qaad jahawareerkaan bulsheed –Waxaa lagu magacaabaa sacab -tumaal marka la joogo riwaayad. Waa maxay qiimaha qof yar oo sacabinaya ama qof kale oo sacabinaya?
Gacan -ku -garaacidda isu -soo -bax ama riwaayad ayaa bixisa tusaale fudud oo si cad u muujinaya tan. Su’aasha laga jawaabayo ayaa ah in qofka masraxa saaran uu sheegi karo in hal shaqsi uu sacabinayo iyo in kale. Waxay u muuqataa inay u muuqato inaysan kari karin laakiin tan si fudud ayaa loogu xaqiijin karaa tijaabinta kuwa shakisan.
Haddii aan ku soo gabagabeeyo inaan sacabkayga la maqli karin, markaa maxaan u calaacalaa? Maxay dadku u qoraan bogga ama dib u eegista abka? Inta badan ma sameeyaan oo taasi waa waxa dib u eegista u roon sababtoo ah rajada laga qabo inay si uun uga dhigto iyaga
Waa maxay Tophatter?
Tophatter waa goob xaraash ah oo lagu iibiyo dharka, boorsooyinka, kabaha, alaabta guriga, alaabta quruxda, elektaroonigga, alaabta guriga, dahabka, farshaxanka, iyo qalabka. Waa guri xaraashka dalwaddii ah. Waxay kaloo dhacdaa inay noqoto mid ka mid ah suuqyada ugu madadaalada badan adduunka.
Tophatter, oo ah shirkad fadhigeedu yahay Palo Alto, CA, waxay qabataa xaraash toos ah oo toos ah maalin kasta halkaas oo iibsadayaasha iyo iibiyeyaashu ay dhexgalaan, ku sheekaystaan, waxna ku dhex maraan. Tophatter waxay maamushaa xaraash dalab oo lacag la’aan ah oo ay martigelinayaan iibiyeyaal aan ahayn Tophatters iyo mid aanad u baahnayn inaad wax lacag ah iska bixiso si aad naftaada u hesho boqolaal xaraashyo xiritaan oo aad u sarreeya.
Dad badan ayaa u malaynaya in Tophatter uu yahay xaraash dinaar. Maaha xaraash dinaar, maadaama dalabyadu yihiin lacag la’aan. Tophatter wuxuu ka duwan yahay websaydhada kale ee dalabka internetka dhowr siyaabood:
Mugga way adag tahay in la qiyaaso iyada oo ay ugu wacan tahay tirada badeecadaha la isweydaarsado maalin kasta. Mugga xaraashku waa weyn yahay kan ugu yarna waa boqollaal. Xaraashyada waxaa ka mid ah waxyaabaha sida dahabka, saacadaha, alaabta guriga, dharka, kaararka hadiyadda, laptops, boorsooyinka, kaamerooyinka.
Si ka duwan websaydhada kale ee ay iibiyeyaashu wax ku bixiyaan si ay u soo bandhigaan alaabtooda iyo iibsadayaashu waxay u bixiyaan dalab, Tophatters kuguma dallacayo inaad dalbato. Waxaad bixinaysaa oo kaliya markaad ku guulaysato xaraashka iyo khidmadda maraakiibta oo lagu daray.
Qandaraasle ahaan, Tophatter wax lacag ah kama qaado. Si kastaba ha noqotee, markaad ku guuleysato xaraashka, iibiyaha ayaa kaa qaadi doona khidmadda maraakiibta taas oo mararka qaarkood ay ka badan karto qiimaha sheyga. Kaliya isha ku hay ka hor intaadan dalban.
Alaabooyinka lagu xaraashay Top Hatter waxaa sameeya iibiyayaal kale. Markaa asal ahaan waxaa jira kumanaan iibiyeyaal alaab xaraasha mar walba. La mid ah eBay, laakiin aad u xiiso badan oo dhakhso badan.
Dib -u -eegistaan ​​Tophatter wuxuu sharxayaa sababta iyo sida saddexdaa arrimood u abuuraan qayb ka mid ah dhibaatooyinka degelkan.
Sidee u shaqeeyaa Tophatter?
Sidii la soo sheegayba, degelku wuxuu leeyahay saddex waxyaalood - iibiyayaal, qaab, iyo mugga xaraashka. Saddexdan ayaa saamayn ku leh sida wanaagsan ee giraangirkani u shaqeeyo. Markaa waxaad aadeysaa barnaamijka 'Topchatter app' iyo websaydhka waxaadna arkeysaa xaraashyo gaagaaban oo aad u badan oo aad dalban karto kadib diiwaangelinta akoon.
Waxa ku saabsan websaydhka ayaa ah inaad u baahan tahay xawaare iyo awood gorgortan oo wanaagsan si aad si wanaagsan ugu adeegsan karto. Xaraashyada waxaa lagu muujiyaa gelitaanka iyo 90 ilbidhiqsi ee ugu dambeeyay, ka dib markii la soo bandhigo xirmooyin cusub. Taas macnaheedu waa in xawaarahaagu uu muhiim u yahay raacdada.
Tani waa sababta oo ah inta dantaadu ku jirto shay gaar ah, waxaad dalban kartaa goor hore oo wali waxaa kaa horjoogsan kara kuwa leh awood wax iibsi oo badan. Tani waxay sidoo kale la micno tahay inay tahay inaad dalbato wax badan haddii aad rabto inaad u istaagto fursad aad ku guuleysato.
Websaydhku kaliya kuma oggolaanayo inaad ku dalbato aaladaha tooska ah, wuxuu kaloo kuu oggolaanayaa inaad dejiso xusuusinta dalabyada soo socda ee aad xiisaynayso.
Dadka akhriya nuxurkaan, waxay ku dambeeyaan akhriska Xulashada Xirfadaha ugu Fiican Mustaqbalka Ka hubi Out
Waxa laga Xusto Xaraashka Tophatter
Waxaad u baahan tahay inaad ogaato in inta badan alaabooyinka ku jira xaraashka aysan ahayn magac summad leh, marka waxaad u baahan doontaa inaad akhrido faahfaahinta iyo sharraxaadda ka hor intaadan dalban, laakiin maadaama xaraashyada ay socdaan kaliya 90 sekan, tani waa wax aad u adag in la sameeyo .
Si aad uga fogaato walbahaarka helitaanka waxyaabo laga yaabo inaad ku dambayso inaadan jeclayn, waxaa fiican inaad u diyaargarowdo dalabyada ka hor waqtiga oo aad akhrido dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato alaabta.
Arrin kale oo aad u baahan tahay inaad ogaato waa inaad la kulmi karto arrimo haddii aad ku guuleysato dalabyo badan adigoon cidna bixin. Haddii ay dhacdo inaad adigu ku jirto xaalad ay jireen dalabyo badan oo ku saabsan badeecad keliya oo aadan u ekaan karin inaad hesho lambarkaaga, waxaa lagugula talinayaa inaad mar kale dalbato waqtiga ugu gaaban ee suurtogalka ah.
Dukaamaysiga Tophatter waa si fudud geedi socodka sugitaanka shayada aad danaynayso, dalbashada, iyo bixinta. Mararka qaarkood, waqtiga ay qaadanayso in alaabtii aad bixisay ay kugu soo gaadho ayaa wakhti qaadata, mararka qaarkood hal toddobaad ama ka badan. Waxaa jira sheekooyin badan oo ku saabsan waxa ku dhacaya iibsadayaasha iyo iibiyeyaasha labadaba kadib gacmaha sarrifka lacagaha.
Sidee Tophatter Lacag U Sameeyaa?
Lacagta ugu badan ee Tophatter samayso waa guddiyo. Waxay ahaan jirtay 10% lacag macaash ah, laakiin hadda si alaabooyinkaaga loogu qoro mid kasta oo xaraashkooda ah, waxaad bixinaysaa khidmadda jadwalka. Lacagtan ayaa la qaadaa haddii alaabtaadu iibiso iyo in kale.
Haddii aad rabto in alaabta mar labaad la xaraasho, waa inaad bixisaa khidmadaha jadwalka. Tani waa sababta alaabada qaarkood ay aad ugu qaali yihiin madasha maadaama inta badan iibsadayaashu ay isku dayaan inay qariyaan wixii khasaare ah ee ay soo gaari karaan awooddooda iibinta awgeed.
Waa middaas ama waxaad isku aragtaa adiga oo lagu leeyahay lacag Tophatter.
Tophatter ma yahay Website Xalaal ah?
Tophatter waa degel sharci ah oo leh arrimo badan. Waxaa jira cabashooyin badan oo ku saabsan habka ay shirkaddu u "jeexjeexday" iibiyayaashooda lacagtooda. Waa waayo -aragnimo. Mid ka mid ah in uu noqdo mid dhab ah in badan oo aad dhex gashid.
Dusha sare, waxaad ku dalban kartaa dhammaan noocyada alaabada - been abuurka wax kasta iyo sidoo kale kuwa asalka ah. Waxaad la yaabi doontaa waxa aad heshid marka alaabtii aad ku guuleysatay markii aad tartameyso ay timaado. Haddii aad nasiib badan tahay, sida dadka intooda badan, waxaad heleysaa heshiis caddaalad ah. Haddii aadan ahayn, waxaad heleysaa wax aad looga xumaado.
In kasta oo Tophatter uu yahay nidaam sharci ah, haddana waa mid u furan xadgudubka. Xadgudubkani wuxuu u socdaa labada dhinacba. Iibiyeyaasha iyo iibsadayaashu waxay ku xadgudbaan nidaamka. Iibiyeyaashu waxay ku takri falaan nidaamka iyagoo ku iibsada alaabo qiimo aad u jaban oo aad ugu iibinaya xaraashyo qiimo aad u qaali ah. Qiimayaashu waa ku filan yihiin inay dadka ka joojiyaan inay wax iibsadaan. Iibiyeyaashu waxay sidoo kale ku xadgudbaan nidaamka iyagoo u soo bandhigaya badeecooyin been abuur ah inay yihiin kuwa dhabta ah dadka aan la hubin.
Iibsadayaashu waxay ku xadgudbaan nidaamka iyagoo diida inay bixiyaan oo soo celiyaan walxaha Tophatter iyagoo raadinaya lacag celin. Mararka qaarkood, marka waxa noocan ahi dhacaan, iibiyaha ayaa si qoto dheer u galay deynta. Deynta noocan ah waa nooca ay iibiyaasha qaarkood awoodi waayaan in ay iska xoreeyaan.
Dib -u -eegista Tophatter
Sida goobo kale oo badan oo bixiya adeegyadan oo kale, goobtu waxay leedahay khaladaadkeeda. Guul -darrooyinka hadda ku hanjabaya inay wakiil ka dhigayaan mareegaha iyo hawlgalada app -ka adeegaha.
Cabashooyinka macaamiisha ee ku saabsan sida iyaga iyo alaabtooda loola dhaqmay loo gaarsiiyey ama aan loo helin gabi ahaanba waxay caddayn u tahay in nidaamku yahay mid fashilmay. Fashilka nidaamka oo si guul leh loogu maareeyay guriga dhexdiisa ayaa hadda soo dhex galay bannaanka oo wuxuu wax u dhimayaa sumadda.
Wax kasta oo aad ugu dambayn ka fikirto haddii Tophatter uu yahay khiyaano ama sharci, xaqiiqdu waxay weli tahay in degelku hadda yahay hoyga dambiilayaasha, iibiyeyaasha aan daacad ahayn iyo iibsadayaasha.
Tophatter wuxuu haystaa ikhtiyaar ah inuu is -beddel ku sameeyo isagoo iska fogeeya dhaqammada qaarkood oo si weyn u muuqday kuwo aan la daboolin labadii sano ee la soo dhaafay.
Nidaamka u furan xad -gudubka, laga horjoogsado inuu ka sii badan yahay, dildilaaca ayaa la dayactiray oo dib loo soo saaray. Tophatter wuxuu lumiyay kalsoonidii dad badan, mana soo celin doonaan dhammaan summaddii dhiigga ee la sii daayay haddii arrimuhu sii socdaan.
Waa inaadan aqrin dib -u -eegista Tophatter oo weli aadan ka warqabin waxa socda.
Dib -u -eegista Nidaamka Dakhliga Guriga: Lacag Ka Hel Guriga | Sharci Ama Fadeexad
Faallooyinka Stash: Sharci ama Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
Qibiddu ma tahay khiyaano xaraash kale oo onlayn ah? Faallooyinka Quibids
Raadinta shirkad caymis oo ku siin karta caymiska heerka ugu fiican ee aad rabto? Wax dheeraad ah ha eegin…
Dillaalku waa qof ama shirkad isku xidha maalgashadayaasha doonaya inay iibsadaan ama iibiyaan dammaanad (sida…
Barnaamijyada Sawirka ugu Fiican si kor loogu qaado Ciyaartaada Instagram -ka onlayn
Miyaad u malaynaysaa in dhagaystayaashaada Instagram -ka ay sii yaraanayaan muddooyinkan dambe? Hadday haa tahay, markaa waxaa jira dhowr barnaamijyo sawir…
Avast vs Norton: Antivirus -ka ugu fiican sanadka 2021 ee PC -yada, Mac, iyo Qalabka kale
Avast iyo Norton labaduba waa barnaamijyo antivirus aad u wanaagsan oo ka ilaaliyay isticmaaleyaasheeda weerarrada internetka, fayraska,…
Waxaad igu heshiin kartaa in hal dariiqo oo wanaagsan oo lagu horumariyo dhaqaalahaaga ay tahay in la helo dakhli dadban.…